Ubuntu 15.10: nhau dzinonakidza kwazvo | Linux Vakapindwa muropa
Ubuntu 15.10: 9 Zvimiro Zvaunofanira Kuziva Nezve
Zvaitwa Ubuntu 15.10 Wily Werewolf neCanonical Uye kunyangwe zvakawanda zvataurwa nezvazvo muzvinyorwa zvakawanda, pamwe pane zvimwe zvitsva zvinoitwa neiyi vhezheni yaunofanirwa kuziva nezvazvo. Zvishoma nezvishoma, vashandisi vanozojairana neiyi nyowani vhezheni yedistro, asi kukupa zano reizvo zvitsva, Isu tinopa 9 maficha iwe aunofanirwa kuziva nezve Ubuntu 15.10.
Canonical yakashanda pane iyi vhezheni yeUbuntu kuti ive neKuburitswa Kwekupedzisira pakakwirira pane zvaitarisirwa, uye kunyangwe ini ndisingapinde mukutonga kana chiri chimwe chezvakanyanya kuburitswa kana kwete, na mhando yekusvetuka kana nyowani maficha Yakapihwa ichienzaniswa neshanduro dzakapfuura, ichokwadi kuti inounza zvimwe zvinonakidza zvinhu. Ndinovimba kuti kusangana kwakamirirwa kwenguva refu kunosvikawo mushanduro dzeramangwana uye hakuzononokeri chero zvazvakatononoka ...
Idzo 9 nhau dzakakurumbira Ndizvo:
Linux 4.2: iyo kernel nyowani iri kutoshandiswa muUbuntu 15.10 ine zvakawanda zvekuvandudza, kugadzirisa zvipembenene, uye kutsigira zvirinani kweiyo itsva AMD GPUs. Zvakare nedzimwe nhau uye kugadzirisa mukubata kweNCQ TRIM, F2FS kunyorera, vatongi vatsva, nezvimwe.
Kubatana 7.3.2: Iyo nyowani vhezheni yedesktop inounza zvidiki zvekushandisa kuvandudza, kugadzirisa kwebug, mabhatani mhedzisiro, kugadzirisa menyu, uye zvimwe zvinhu zvitsva muDash.
GNOME 3.16 Mapurogiramu: iyo inosanganisirwa GNOME package pack yakagadziriswa kune vhezheni 3.16.x nekumwe kugadzirisa kwakaitwa. Iyo terminal yakagadziridzwa, kunyangwe mamwe maapplication akaita seGedit neNautilus akasara mushanduro 3.10 uye 3.14 zvichiteerana
GNOME scroll bar: ikozvino mipumburu yemafafitera akaiswa pamusoro, ayo isu tanga tatoona, asi zvakakodzera kuyeuka izvi "zvitsva" zvichienzaniswa neshanduro dzekare umo dzaisawanzoonekwa uye dzaive dzakavanzwa.
Ubuntu Mugadziri: rairo yekushandisa yekushandisa kurodha yazvino vhezheni yeakakurumbira maturusi maturusi kuita kuti hupenyu huve nyore kune vanogadzira. Uye zvakare, iko zvino inotsigira mamwe mapuratifomu, maficha matsva uye masevhisi, yakazara Android nharaunda dzekuvandudza, nezvimwe.
Mazita matsva emidziyo yenetiweki: wlan0, eth0, eth1,… chinhu chekare, ikozvino ivo vachapa matsva uye akazara mazita eneti yedhijitari.
Steam Mutungamiriri Anodzora: isu tatoratidza kuti sei kuvaka yedu Steam Machine uye isu tinotaura nezveValve controller, nekuti Ubuntu 15.10 ichasanganisira yemuno rutsigiro yeino inoshamisa yevhidhiyo mutambo controller
Mutsva wedesktop mamiriro: inounza nyowani default Wallpaper uye mamwe mamiriro matsva kudesktop yedu.
Yakagadziridzwa maapplication: Mimwe yemapurogiramu kana zvirongwa zvinouya zvakatomisikidzwa neUbuntu 15.10 zvakagadziridzwa kune zvitsva zvinyorwa. Mimwe mienzaniso ndeyeFirefox 41, Chrome 45, LibreOffice 5.0.2, Totem 3.16, Nautilus 3.14.2, Rhythmbox 3.2.1, Terminal 3.16, Shotwell 0.22, Empaty, ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Ubuntu 15.10: 9 Zvimiro Zvaunofanira Kuziva Nezve
nyowani desktop desktop? O_o
Charles Solano akadaro
Ndatenda zvikuru, Isaac !!! Ngatiedzei ...
Pindura Carlos Solano
Iyo Chrome 46.
Pindura kuna Junior
Ini hapana chandinoziva nezve komputa, asi ini ndanga ndanzwa zvakanyanya nezveLinux iyo yandakayedza, handizive kuti, kuita bvunzo kubva kuUSB pane Toshiba Satellite C655D-S5130 Lap Top ine AMD E-240 processor 150 GHz uye 2.60 yeRam inoshandiswa, makumi matanhatu nematanhatu uye kadhi yemifananidzo ye AMD Radon HD 64 (ini ndaive neWindows 6310 Kumba Premium zvishoma nezvishoma uye zvishoma nezvishoma) uye neiyo HD izere izere). Windows yaive yakaoma kumhanya zvekuti ndakafunga kurodha bvunzo Ubuntu panzvimbo. Akatanga kumhanya zvisina mukare akamboona Lap rangu. Yakagadziridzwa uye ikozvino ndine Ubuntu 7. Ini ndakaisa Gallium Graphics 15.10 pane AMD PALM (DRM 0.4, LLUM 2.43.0). Ini handinzwisise chero software, asi ini ndinofunga yakanaka, inomhanya zvese zvaungade kumba.
WTF inosimbisa nyowani desktop desktop, yakadii boludéz!
Raul villaman akadaro
Zvakanaka mune yangu kesi, ndiri kutamba muLinux nekuti ini ndoda kudzidza kuronga nekuita zvinhu zvitsva, ndakanzwa nezveLinux uye saRaul ndakayedza ne USB uye ndakashamiswa neiyo interface uye kuti zviri nyore sei kushandisa uye Kurumidza. Ndingafarire chero rubatsiro maringe nemashandisiro aro uye maitiro ekuita mariri. Ndatenda, kana iwe uchikwanisa kunditumira iwo ekutanga mirairo kune yangu email, ndinozvifarira.
Pindura Raúl villaman
Jesu Perales akadaro
Ini ndiri mushandisi wakajairika wefedora asi sezvo ini ndichigovana yangu laptop ndakasarudza kuisa ubuntu palaptop yangu, pane xubuntu, ndiri kufara nazvo, asi ini ndaida kuziva kana zvichinyatso kukosha kukwidziridza xubuntu yangu? Iva wakatsiga.
Pindura kuna Jesu Perales
Ini ndichangoisa Ubuntu vhezheni 15.10 paPC yangu. Yakanaka kwazvo kwazvo. Ndine dzimwe nyaya dzepiri uye ndingafarire kuwana rubatsiro. Dambudziko 1: Yangu HP Officejet Pro 8100 purinda yakazivikanwa nekukasira. Asi ini handikwanise kushandisa 2-mativi ekudhinda maficha anoitwa neprinta. Dambudziko 310: Ndine Logitech C3 wecam, iyo isingandizive uye ini handisi kuwana mutyairi. Dambudziko 4110: chinhu chimwe chete chinoitika kwandiri ine scanner, HP Scanjet G7. Naizvozvo, ndiri kujairana nemahofisi ekunyorera, ayo andinoda, uye ndichaona mamwe ese. Mabhurawuza eMozilla uye mamaneja eemail anoshanda zvakakwana kwandiri, uye zvese zvinoenda nekukurumidza zvakanyanya kupfuura neWinXNUMX. Ndatenda
gabriel jaime alvarez guisao akadaro
Ini ndinoshanda neWindows uye Ubuntu 15.10 neimwe nzira; Chokwadi ndechekuti, Ndinoona kuti Ubuntu yakwanisa kukwira nhanho zhinji munzvimbo yayo zvakawandisa, zvinoita sekunge kwandiri yemahara software ndeye hunyanzvi mune zvese, pasina kudzikisira Windows, iro rinongova bhizinesi iro izvo zvinodiwa nevashandisi vanokwanisa kudzora; Kubhurawuza paUbuntu kwakachengeteka, kutamba paWindows kunonyaradza, uye kushanda pane ese ari maviri kwakanaka; Ini ndinoshandisa Ubuntu nekuda kwezvikonzero zvakawanda uye handirege kushandisa Ubuntu chero chikonzero kana ndine chokwadi ... zvishuwo zvangu zvakanaka uye makorokoto kune vanhu vanofunga nezve vanhu uye vanoziva kuti Software inzvimbo yenyika nhaka, yakapusa, kunyange kana iri mutsara kubva mudhirowa, vanondiyemura!
Pindura kuna gabriel jaime alvarez guisao
Kana Ubuntu pavhura munda wemitambo uye dhizaini, ipapo Windows ichatanga kuzunza nyika ichave yakakamurwa kuita mbiri uye izvo zviri padyo mazuva ese.
Mhoro unogona kundibatsira padambudziko iri: nekusimudzira:
Kubvisa matemplate emapakeji: 100%
Kugadzirira mapakeji ...
dpkg: kukanganisa: verenga kukanganisa mu `/var/lib/dpkg/info/initramfs-tools.triggers ': Iri dhairekitori
E: Sub-process / usr / bin / dpkg yakadzosa kodhi yekukanganisa (2)
Mushure mekuvandudza kubva v14, ini ndinotanga 15.10 mune yekuraira mutsara modhi.
Ini ndinotanga sei mune giraidhi modhi?
Ini handina kuchinja Ubuntu 15.10 kusimudzira kuita 16.04 asi ndakafunga kudzokera ku15.10 yakagadzikana zvakakwana. Tsananguro ini handisati ndambowana chimwe chinhu chakakosha sekubhoja pendrive munzira ipi neipi Unetbooting kana kubva kuchiteshi kana chero chimwe chirongwa ... chimwe chinhu chinoitika kuna 15.10 nezvazvo ... uyezve chinetso chinowanzoitika cheWini iyo isingaone zvishandiso .. .kana Virtualbox..ni kunyangwe iwe ukaisa zvinowedzera izvo zvisingabate ... uye zvese zvakanaka.
TO! uye ini ndaifanira kutaura kuti Totem player, inova yekusarongeka, haishande, kana muna 15.10 kana muna 16.04 ... zvakanaka, asi kune zvimwe zvirinani ...
Enda Kwazvo!, Task Shedhiyo yeLinux
Kurumidza uye gadzirisa Kubatana pane yako Ubuntu kuti uwane kuita